Realme GT 2 Pro sida sharadka heerka sare ah [Falanqaynta] | Qalabka Wararka
Dhawaan Waxaan falanqeyneynay labadii wax lagu daro ee Realme ay ku sameysay qeybta hoose, si kastaba ha ahaatee, joogitaankeeda Congress-ka Mobile World Congress ee lagu qabtay Barcelona waxay keentay soo kordhin cusub oo muhiim ah oo ku saabsan buug-gacmeedka astaanta, qalab leh dhammaan maaddooyinka loo tixgeliyo "dhamaadka sare".
Waxaan si qoto dheer u falanqeyneynaa Realme GT 2 Pro cusub, beddelka ugu dambeeyay kaas oo sumaddu ay rabto inay bixiso beddelaad heersare ah. Na soo hel dhammaan macluumaadka ku saabsan qalabkan iyo inay mudan tahay in la helo iyo in kale.
1 Naqshad: Iyadoo la socota Realme
2 Tilmaamaha farsamada: Waxba kama maqna
3 Madax-bannaanida iyo waayo-aragnimada warbaahineed
4 Kamaradaha: Mikroskoob hoostooda
6 Faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Naqshad: Iyadoo la socota Realme
Realme GT 2 Pro waxa ay leedahay nashqad la socota wadadii waxa ilaa hadda soo bandhigay astaanta Aasiya. Sida laga soo xigtay Realme, waxaa lagu sameeyay daboolka dambe ee polymeric (caag). Waxay hoos u dhigtaa raadka kaarboonka ee looga baahan yahay soosaarkeeda ilaa 35%, iyo sidoo kale xaradhka laysarka oo leh 0,1 millimitir; waxa u dheer agab dib loo warshadayn karo oo taxane ah iyo khad soy ah. Sida naqshadeynta, badhanka "awoodda" ee dhinaca midigta iyo mugga bidixda, sida had iyo jeer.
Waxaan leenahay USB-C xagga hoose iyo ilaa saddex hadh si loo helo: Caddaan, cagaar iyo buluug.
Miisaanka: Gram 189
Cabirrada: 74,7x163x8,2 mm
Oogada faa'iidada leh: 88%
Qalabka: balaastiig iyo aluminium
Dhinaca kale, Gawaarida hore ee 0,40 milimitir oo keliya ayaa ballanqaadaya inay ka mid yihiin kuwa ugu khafiifsan suuqa, Waxaa la yaab leh in afarta dhinac ee aaladda aysan aheyn mid isku mid ah oo dareenka uusan u fiicneyn sida aan qiyaasi karno. Module kamarad gadaal ah oo la mid ah inta kale ee Realme ee dhawaanahan oo leh saddex dareemayaal iyo flash dual LED ah. Dabcan, ku xiga moduleka kamarada waxaan haynaa calaamadda aaladda iyo saxiixa naqshadeeyaha labadaba. Tayada la dareemayo iyo naqshadeynta ma dhihi karno in Realme-kan ay gaarsiisan tahay heerar kale, kuma eka mid ku filan dhankan, laakiin waxaa la mahadiyay inay had iyo jeer sameyso hal-abuurnimo.
Tilmaamaha farsamada: Waxba kama maqna
Realme GT 2 Pro wuxuu ku dhuuntaa daboolka hoostiisa a Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, oo ay la socdaan 12GB ee LPDDR5 RAM iyo 256GB Kaydinta xawaaraha ugu sarreeya ee tignoolajiyada UFS 3.1, taas oo lagu ogaan karo waxqabadkeeda, tan iyo Antutu V9 waxay u taagan tahay 1.003.987 dhibcood, taas oo ah, in ka badan 99% qalabka suuqa. Isticmaalka maalinlaha ah, xadiga aadka u sarreeya ee gudbinta xogta iyo akhriska, oo ay weheliso xusuusta RAM weyn iyo processor-ka gaarka ah, waxaan helnay natiijooyin la filayo.
Xusuus: 128 / 256 GB
Processor-kiisu wuxuu bixiyaa siddeed nooc 1×3.0GHz Cortex X2+3×2.5GHz Cortex A710+4×1.80GHz Cortex A510 oo ah inta jeer ee 3GHz oo leh naqshad 4 nanometer ah. Intaa waxaa dheer, waxaa taageera a GPU Adreno 730 taasi waxay la socon doontaa natiijo wanaagsan ee waxqabadka garaafka.+
5G iyo LTE
Waxaas oo dhan si ay u socodsiiyaan Realme UI 3.0, lakabka habaynta ee ku shaqeeya Android 12 iyo in kasta oo ay aad u fudud tahay, had iyo jeer waxay leedahay dhibaato adware oo aan loo dulqaadan karin aaladda qiimahan, codsiyada horay loo sii rakibay sida TikTok ama Facebook.
Madax-bannaanida iyo waayo-aragnimada warbaahineed
Calan ahaan waxay sitaa shaashadeeda, gole 6,7-inch AMOLED si aad u wanaagsan loo hagaajiyay oo leh tignoolajiyada LTPO 2.0. Gudigani wuxuu leeyahay 2K qaraar o WQHD + ee 1440 × 3216 pixels taasoo siinaysa wax aan ka yarayn hal dcufnaanta 526 pixels halkii inch. Waxay leedahay dhalaalka ugu badan ee 1.400 nits waxaana ilaaliya galaas Gorilla Glass Victus.
Sida aad qiyaasi karto, waxay leedahay waafaqid HDR10 + oo ay weheliso cabitaan fudud la qabsi (Qaabka Tufaaxa) ilaa 120Hz, kaas oo si toos ah uga faa'iidaysan doona waxqabadka iyadoo lagu saleynayo baahida codsi kasta. Meesha Realme GT 2 Pro mar kale soo jiidato dareenka ayaa ku jirta taabashada heerka cusbooneysiinta wax aan ka yarayn 1.000Hz, taas oo ku dhow labanlaab waxa caadiga ah ee xadkan (qiyaastii 600Hz).
Tani waa sida tan Realme GT 2 Pro ay u bixiso khibrad warbaahineed weyn oo ay weheliso laba ku hadla si ay u bixiyaan stereo dhawaaqa Dolby Atmos technology iyo sidoo kale Hi-Res Audio oo imtixaanadayada lagu sameeyay mug aad u sarreeya iyada oo aan wax qalloocin ah lahayn.
La 5.000 mAh baytarigu waxa uu bixiyaa 9 saacadood oo wakhtiga shaashadda ah, oo uu si degdeg ah u dalaci karo 65W Markii horeba loo yaqaan falanqaynta kale iyo sida had iyo jeer si buuxda u bixinta dallacaadda wireless-ka.
Marka lagu daro xakamaynta qalab aad u badan, qalabku wuxuu ku dhejiyaa qaboojinta qolka uumiga caadiga ah, waana taas Realme GT 2 Pro sidoo kale waxay diiradda saartaa ciyaaraha, halkaasoo ay si cad uga muuqato. Waxaan awoodnay inaan qadarin waxqabadka wanaagsan ee dhinacan iyo awoodaha dhererka sare ee kala duwan ee ka soo horjeeda codsiyada iyo ciyaaraha.
Kamaradaha: Mikroskoob hoostooda
Mid ka mid ah soo jiidashada ugu weyn ee Realme GT 2 Pro waa kamarada saxda ah, halkaas oo ay ku xaajooto qaar ka mid ah fasalada darajada sawirada, tan waxaan u falanqeyneynaa mid kasta oo ka mid ah dareemayaasha si gaar ah.
50 MP Sony IMX766 OIS PDAF dareeraha: Waxay leedahay xasilinta indhaha iyo elektarooniga isku mar, waxaan leenahay taam wanaagsan, hab habeen wanaagsan iyo duubitaan fiidiyoow ah oo aan waxba ka tagin Samsung ama Huawei ee shaqada mar kasta oo aan ka hadalno sinnaanta qiimaha.
Dareemka xagasha ballaadhan: Sawirka ugu ballaadhan ee suuqa lagu sharmayo 1º Fisheye Samsung JN150 shidma leh pixels micrometer ah haddii aan isticmaalno bixel bining si aan u helno natiijooyin 12,5 MP ah. Waxay bixisaa tallaal wanaagsan xitaa xaaladaha iftiinka xun sidaas darteed waxay noo ogolaaneysaa inaan ka fogaano kuwa caadiga ah oo aan ku ciyaarno xaglaha.
Lens-yar oo leh 40-weyneyn indho-indhayn ah oo loogu talagalay natiijooyinka makro-iyo-yaryar.
16MP kamarad Selfie ah oo leh faragelin xoog badan oo Habka Quruxda.
Waxaan haynaa qalab "dhammaad sare" ah oo leh qiime la hagaajiyay oo leh dhammaan sifooyinka laga fili karo qiimahan qiimaha leh oo doonaya inuu "kicin" dhaqanka oo leh heer aad u sarreeya oo taabasho ah, xagasha ballaadhan iyo wax ka badan. .
Realme GT 2 Pro ee 8 + 128 laga bilaabo 749,99 euro
Realme GT 2 Pro ee 12 + 256 laga bilaabo 849,99 euro
Faa'iidooyinka iyo khasaaraha
Kamarad aad u karti badan
Qalab ka badan ilaa hawsha
waayo-aragnimo warbaahinta weyn
La'aanta tayada la dareemo
qiimuhu maaha mid carqaladaynaya, wuu kaa soo horjeedaa
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Realme GT 2 Pro sida sharad loogu talagalay kala duwanaanta sare [Falanqaynta]
Ka faa'iidayso soo bandhigista Doogee V20, mobaylka cusub ee adkeysi badan leh